China sy multi-turn Electric Actuator factory ary mpanamboatra | Nortech
Inona ny atao hoe Multi-turn Electric Actuator?
Multi-turn Electric Actuator Andiany HEM dia taranaka vaovao mpihetsiketsika herinaratra marolafy namboarina sy novokarin'ny ekipa teknikan'ny NORTECH mifototra amin'ny filan'ny mpampiasa sy ny traikefa niainany nandritra ny taona maro.
Endri-javatra lehibe an'ny Multi-turn Electric Actuator
1. Azo itokisana
Ny famolavolana ireo mpikatroka andian-tsarimihetsika HEM dia nandinika ny fampiharana tamin'ny fotoana henjana indrindra, ary ireo ampahany nampiasaina dia nodinihina mafy ary nosedraina mba hahazoana antoka fa azo itokisana maharitra ireo fitaovana. Miorina amin'ny traikefa an-taonany maro amin'ny famolavolana sy ny famokarana ao amin'ny indostria actuator, ny mpikatroka tsirairay dia zahana isaky ny sosona alohan'ny handaozany ny ozinina mba hiantohana ny fiasa maharitra sy azo antoka an'ny actuator amin'ny toe-javatra iasana. Ny taranaka mpikatroka vaovao dia manana ny fomba fanaraha-maso voatsara indrindra; ny fomba fanodinana mari-pamantarana nohatsaraina dia manana fiarovana tanteraka amin'ny famantarana fanelingelenana amin'ny famantarana fanaraha-maso; ny lavaka elektrika dia ao amin'ny trano fonenana tsy misy tombo-kase roa, ary azo ampiasaina ny setroka infrared amin'ny tanana. Mametraha masontsivana isan-karazany amin'ny actuator elektrika, ary ny singa rehetra dia mahafeno ny fepetra takiana amin'ny grade-proof.
2. Fikirakirana debugging tsotra
Ny debugging sy ny fikirakirana ny lozisialy dia tsotra kokoa ary mora kokoa amin'ny mpampiasa, miaraka amina interface milina-milina vao noforonina, mora ny takatry ny menus graphique, ampiarahina amin'ny torolàlana momba ny asa mifanaraka amin'izany mba hahamora kokoa ny fametrahana ny masontsivana. Ny fiantohana fa napetraka tsara ireo masontsivana ary ny fitazonana ny fiarovana azy ireo no fototry ny fiasan'ny milamina. Ny interface interface dia be dia be kokoa, manome safidy isan-karazany, fikirakirana, famaritana ary asa hafa, amin'ny alàlan'ny LCD dot matrix avo lenta, izay afaka mifamadika mora eo anelanelan'ny fampisehoana sinoa sy anglisy, ny mpampiasa dia tsy mila mahatadidy tarehin-tsoratra maro, fotsiny araho ny bitsika eo amin'ny efijery. Ny debugging dia mety raha mifanaraka amin'ny tontolon'ny asa samihafa.
3. Fomba fanaraha-maso marobe
Ny hetsi-panoherana maro-maro HEM dia afaka manome karazana fanaraha-maso maharitra mifototra amin'ny karazana switch sy karazana fanitsiana tany am-boalohany, ao anatin'izany ireo fiara fitateram-bahoaka isan-karazany toy ny Modbus-RTU sy Profibus-DP. Mety amin'ny filan'ny fanaraha-maso isan-karazany.
4. Fiasa fitadiavana tena sy fiarovana tanteraka
Izy io dia afaka mamantatra ny toetran'ny môtô be loatra, ny hafanana be loatra ary ny toeran'ny famatsiana herinaratra. Izy io koa dia afaka mamantatra ho azy ny fizotran'ilay famatsiana herinaratra dingana telo. Tsy hisy ny tsy fihoaram-pefy noho ny fiovan'ny tariby. Amin'ny vonjy taitra, ny actuator dia azo tazonina amin'ny toerany na mihazakazaka mandroso Ny toerana azo antoka napetraka; ny actuator koa dia manana fahaizana mandrefy tsara ny torque output, ary miaro ny valizy mandritra ny fandidiana hisorohana ny valizy tsy hianjera; raha mikatona ny valizy, rehefa alefa ny famantarana fanombohana, dia tsy hisy ny hetsika rehetra, ny fikajiana lozika dia afaka manapaka ny motera hisorohana ny hafanan'ny motera ary handefa famantarana fanairana;
Famaritana ara-teknika ny Multi-turn Electric Actuator
Fampiharana vokatra: acteuror elektrika mihodina
Multi-turn Electric Actuator no tena ampiasaina hifehezana ny valves sy ny valizy elektrika. Izy io dia azo apetraka amin'ny valizy eran-tany, valves vavahady sns sns ary valizy baolina lehibe, valves lolo, valve plug, miaraka amina boaty fanodinam-bokatra hampihenana ny salan'ny tsela, fampiasana herinaratra fa tsy herin'olombelona nentim-paharazana hifehezana ny fihodinan'ny valizy hifehy ny rivotra, rano , etona, haino aman-jery manimba isan-karazany, fotaka, solika, metaly misy rano ary haino aman-jery radioaktifa. Fikorianan'ny rano sy ny lalana
Teo aloha: Fizarana ampahany mihodina mavitrika Electric Model an'ilay fipoahana porofo LQ
mpampita herinaratra ho an'ny valizy vavahady
Ampahany mihodina herinaratra actuator Fipoahana porofo LQ ...